JINGYE RO Ọgwụ Mmiri na-eji teknụzụ RO eme ihe iji gwọọ mmiri，RO bụ otu ụdị nke akpụkpọ ahụ nkewa teknụzụ nke tinye n'ọrụ akpụkpọ ahụ mgbali iche iji kewaa raw mmiri si ike ngwọta na-adịghị ike. Okwesiri ịgwọ ụdị mmiri mmiri dịka mmiri ọma, mmiri iyi, mmiri osimiri, mmiri mmiri ozuzo, mmiri pọmpụ (mmiri brackish) na mmiri n'oké osimiri. Ke ofụri ofụri, ọ bụ ihe kasị echekwa usoro nke desalination nke brackish mmiri na oké osimiri. Ọ nweghị njikwa kemịkal dị egwu ma dabara maka gburugburu ebe obibi dị ọcha.
JINGYE RO Ọgwụgwọ mmiri bụ maka ịmị mmiri ọ drinkingụ drinkingụ, ụlọ oriri na ọ foodsụ factoryụ, ụlọ ọrụ na-averageụ ihe ọ ,ụ ,ụ, mkpụrụ osisi na ihe ọkụkụ wdg.
Ike: 0.25-5T / h;
Nke gara aga: Igwe igwe